MC KZONE, Author at VPS - MCKZONE
အိမ်ထောင်သက်(၂၁)နှစ်ပြည့်မှာ ဘောလုံးကွင်းတစ်ခုလုံးငှားပြီး နေကြာပန်းတွေနဲ့ စပရိုက်လုပ်ခံလိုက်ရတဲ့ စမိုင်းလ်
နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင် မင်းသမီးချောတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ စမိုင်းလ်ကတော့ မင်္ဂလာသက်တမ်း အနှစ် (၂၁) ပြည့်မှာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လုပ်ပေးတဲ့ Surprise ကြောင့် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ (၁၉၉၉) ခုနှစ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင် စမိုင်းလ် နဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပြည့်မောင် တို့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ မင်္ဂလာသက်တမ်း အနှစ် (၂၁) ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာသက်တမ်း(၂၁)နှစ်ပြည့်မှာတော့ စမိုင်းလ်ရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပြည့်မောင်ဟာ Yangon United Sports Cpmplex(YUSC)ရဲ့ မြက်ခင်းတုကွင်းကြီးငှားကာ နေကြာပန်းတွေနဲက ခမ်းခမ်းနားနားအလှဆင်ကာ နိုင်ငံကျော် Rock Band တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Idiots အဖွဲရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူ စပရိုက်အကြီးအကျယ် လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးချော စမိုင်းလ်ကတော့ “ရူးနေပြီမောင်ရေ no more […]
Posted in: CELEBRITYMC KZONE	 February 15, 2020
တာဝန်ကြောင့် မျက်ရည်တွေကြားထဲမှာ ပြုံးနေရတဲ့ တိုးလ်ဂိတ်ဝန်ထမ်းမလေး
ဘယ်လိုနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အများပြည်သူကို ၀န်ဆောင်မှုပေးရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အပြောအဆို အခံရဆုံးပါပဲ။ လူအများကြီးကို ၀န်ဆောင်မှုပေးရတဲ့အလုပ်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် စိတ်တိုင်းမကျသူတွေနဲ့ တွေ့ရင် အပြောအဆို ခံရတာ ရိုးနေပြီလို့တောင် ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့လည်း လူသားတွေပဲလေ။ ခံစားတတ်ကြသူတွေပါပဲ။ အခုလည်း တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးလ်ဂိတ်တစ်ခုမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းအမျိုးသမီးလေး တစ်ဦးဟာ ကားဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ရဲ့ ဆူပူအော်ငေါက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီး မျက်ရည်ကျနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူမ က တိုးလ်ဂိတ်မှာ ကားမောင်းသူတွေ လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်းအသစ်တွေကို ရှင်းပြရတဲ့သူ ဖြစ်ပြီး စိတ်မရှည်တဲ့ ကားသမားတစ်ယောက်က သူ့ကိုအော်ငေါက်သွားခဲ့တာပါ။ သူမ က အဲဒီအဖြစ်ကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်လို ငိုနေခဲ့ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ မန်နေဂျာဖြစ်သူက သူမရဲ့အရှေ့ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ မန်နေဂျာဖြစ်သူက သူမကို နှစ်သိမ့်ပေးပေမယ့် သူမက […]
Posted in: LIFESTYLEMC KZONE	 February 10, 2020
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်ဖက်ရှင်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်တွင် နောက်ထပ် အနုကြမ်းစီး ဓားပြတိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွား
ပြီးခဲ့တဲ့ ၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် ၃၅ ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ CB Bank ကို လူနှစ်ဦးက လက်နက်နဲ့ အနုကြမ်းစီးခဲ့ပြီး ဗုံးအတု ထောင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကိုသေနတ်ထောက်ပြီး ငွေ သိန်း ၆၀၀ ကို လုယက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူ ညပိုင်းမှာလည်း ဗဟန်းမြို့နယ် ရေခဲဆိုင်မှတ်တိုင်အနီးမှာရှိတဲ့ Fashion ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို မျက်နှာစည်းတပ်ထားတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားဖြင့် ဝင်ရောက်အနုကြမ်းစီးမှုတစ်ခု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လိုိ့သိရပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်က အမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း The Avenue မှ ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ ပါသွားတဲ့ ငွေကြေးပမာဏကိုတော့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ရန် တိုင်ကြားခြင်းရှိမရှိကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ Writer – SMT ( Shwe Yaung Lan […]
Posted in: NEWSMC KZONE	 February 8, 2020
သေသည်အထိ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ မင်းသားကြီး အကယ်ဒမီ ဦးစိုးရွှေ ကွယ်လွန်
ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံသရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဦးစိုးရွှေဟာ ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ ၁၀ မိနစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အနုပညာရှင်ကြီးတစ်ဦးကြွေလွင့်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဦးစိုးရွှေဟာ ၁၉၆၆ ခုနှစ် မြေမှာပွင့်သောမေတ္တာပန်း ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဗီဒီယိုနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ရပြီး သူဟာ သေသည်အထိ အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ချင်တယ်လို့ ဆိုသွားသူတစ်ဦးပါ။ အကယ်ဒမီဦးစိုးရွှေက ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာမှ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားလိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒူးပြုတ်ကျတဲ့ ဝေဒနာကြောင့် လူတန်းစေ့သွားလာမနေနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အကယ်ဒမီ မင်းသားကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးစိုးရွှေဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့ အသက် ၈၃ နှစ် ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူချစ်တဲ့ အနုပညာကိုမြတ်နိုးရင်း ဆုံးပါးသွားတဲ့ ဦးစိုးရွှေတစ်ယောက် ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘဝကိုရောက်ရှိပါစေလို့ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ […]
Posted in: CELEBRITYMC KZONE	 February 8, 2020
အင်တာနက်ပေါ်မှာ အရမ်းကို လူကြိုက်များနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကျောင်းဆရာမလေးရဲ့ စိတ်ကူး
ဆရာ/ဆရာမတွေဆိုတာ ကလေးတွေကို နာ ၃ နာနဲ့ စာသင်ကြားပေးနေသူတွေပါ… မိမိတို့အကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲ အနာဂတ်မှာ အားကိုးရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ငယ်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေကြသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါ့အပြင် မိဘတွေကိုယ်စား ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးကြသူတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး… ဒီလို ကျေးဇူးတွေရှိတဲ့ ဆရာ/ဆရာမတွေထဲက ဆရာမလေးတစ်ဦးရဲ့ ကလေးတွေအပေါ် ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးလေးက လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေပန်းစားနေတာပါ…. လက်ရေးအလှဆုံးဆု၊ သင်္ချာအတော်ဆုံးဆု၊ အတိုးတက်ဆုံးဆု၊ အလှဆုံးအပြုံးဆု၊ တာဝန်ကျေပွန်ဆု၊ အကြိုးစားဆုံးဆု၊ တာဝန်ကျေပွန်ဆု စသဖြင့် ကလေးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ထူးချွန်ရာကို ဆုတွေချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာပါ…. ဆုက တန်ဖိုးမကြီးတဲ့ ခဲတံလေးသာဖြစ်ပေမယ့် ဆရာမ ပေးလိုက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဟာ ကလေးတွေအတွက် တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး… ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ငါ့မှာ ထူးချွန်တာတစ်ခုခုရှိသေးပါလားဆိုပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့စေတာပါ… ဒါကြောင့် ဆရာမလေးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးလေးက […]
Posted in: LIFESTYLEMC KZONE	 February 7, 2020
CB Bank ကို အနုကြမ်းစီးကာ ဗုံးထောင်ထားခဲ့သည့် CCTV ဗီဒီယိုဖိုင် ထွက်ပေါ်လာ
အောက်တွင် ဗွီဒီယို တင်ထားပေးပါသည်။ ယနေ့နက်နက် ၇ နာရီခန့်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြောက်ဒဂုံ ၃၅ ရပ်ကွက်က CB Bank ကို သေနတ်နဲ့ အနုကြမ်းဝင်စီးပြီးတော့ ပိုက်ဆံသိန်း ၆၀၀ ကို ယူပြီး မိုင်းထောင်ထားခဲ့တဲ့ CCTV ရုပ်သံထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ဒီရုပ်သံထဲမှာဆိုရင် ဘဏ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးဖြစ်သူ ထံက ပိုက်ဆံကို ခြောက်လှန့်တောင်းယူနေပြီးတော့ မိုင်းအတုကိုထားခဲ့တဲ့ တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနုကြမ်းစီးသူတွေဟာ ပိုက်ဆံကိုယူပြီး တက္ကစီ နံပါတ် CC -9965 နဲ့ ၃၅ ရပ်ကွက်က လမ်းမကြီးအတိုင်း ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ CCTV မှတ်တမ်းတွေ၊ ကားနံ့ပါတ်တွေလည်း ရထားပြီဆိုတော့ မကြာခင်မှာ ဖမ်းဆီးနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ခန့်မှန်းသိရှိရပါတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ Writer – SMT( Shwe Yaung […]